Umoya ohambisa iingcambu blower, China umoya womoya ohambisa iingcambu zabavelisi, ababoneleli, umzi mveliso - NANTONG RONGHENG INDALO YOKUSINGQONGILEYO KWIZIXHOBO, LTD.
Ikhaya>iimveliso>Iingcambu Blower / Vacuum Pump>Umoya Ukuhambisa Iingcambu Blower
Ezona zicelo ziphambili ze blots blowers kwimveliso yokuhambisa umoya ibandakanya: ishishini leekhemikhali, ukuhambisa ukutya okuziinkozo, ukuhambisa desulfurization kunye nokuhambisa uthuthu, ishishini lesamente, ukuhambisa umgubo, njl.
Olona phawu lubalulekileyo lokuhambisa umoya kukuba i-blower iqala kwaye ime rhoqo, uxinzelelo olukhawulezileyo luphezulu, kwaye kunokubakho ukuvalwa kombhobho.
Kwi-series ye-pneumatic ehambisa i-Roots blower inomgangatho ozinzileyo, ulawulo oluchanekileyo lobhaliso, kunye namandla angaphezu kwamandla omatshini wonke, onokuqinisekisa ukuqala kakuhle kwe-blower phantsi kweemeko zoxinzelelo oluphezulu kunye nokuphepha ukuvalwa kombhobho; kwimeko yempembelelo, ukucocwa kwempompo kuzinzile kwaye umatshini wonke uqhuba kakuhle.
Nje ukuba ukuvaleka kombhobho kukuhambisa umoya, kulula ukubangela iingozi zezixhobo. Uphawu lokungenisa uphawu lwangaphandle kwiprojekthi yokuhambisa ukutya okusengqeleni yeqela lokutya okuziinkozo eLiaoning, ngenxa yokungonelanga kwamandla entsalela yezixhobo, amandla omatshini wonke anqabile, ukuvalwa kombhobho kwenzeka ngexesha lokuhamba umgama omde, obangela ukuba izixhobo ziyeke kwangoko , kunye nomthamo omkhulu wegesi oxinanisiweyo kumbhobho Impembelelo yomoya wentwasahlobo, ukubuyela kwakhona kwikholamu yomoya kuchaphazela ukonakala kwesixhobo sonke.
Ngexesha lotshintsho lweprojekthi, ngokweempawu ezibonakalayo zomgubo we-gluten umgubo kunye ne-viscosity ephezulu kunye nokuhlala ngokulula, inkampani yethu ikhethe uhlobo lwamagqabi olunomoya omkhulu wokuhamba komoya, kwaye sisebenzise iimveliso ezinamandla aphezulu ngamandla ashushu shaft, amandla amakhulu agqithisileyo, kwaye akukho linyathelo inyathelo shaft engundoqo. Uqwalaselo, ukufezekisa ngempumelelo umgama othe tyaba we-500M, intloko ye-30M yokuhamba umgama omde, kunye nokusebenza okukhuselekileyo nokuzinzileyo ukuza kuthi ga ngoku.
Indawo yabalandeli ichithwe kukuhamba komoya
Kwi-desulfurization kunye nomzi mveliso wothutho lothuthu, kukho uxinzelelo oluphezulu olukhawulezileyo ngaphezulu kwe-80kPa. Ukujonga le meko yokusebenza, i-fan yomoya ehambisa umoya womoya icwangciswa ngombhobho womoya opholileyo kuyilo lolwakhiwo, olunokusebenza ngokuzinzileyo phantsi kwemeko yokusebenza ehambelanayo ngaphandle kwemibhobho yokupholisa amanzi eyongezelelweyo, eyenza lula ukumiselwa kwemveliso kwaye igcine iindleko zokusebenza.